Texas Holdem Poker - Atụmatụ zuru oke maka ihe ịga nke ọma na Poker - pisklak.net
Texas Holdem Poker – Atụmatụ zuru oke maka ihe ịga nke ọma na Poker
Needchọrọ iwu Texas Holdem niile nke poker? Ichoro ighota ihe nile ichoro iji nweta ya d e poker? Agafela t even akwụkwọ akụkọ that a mgbe ahụ.
Onye ọ bụla ị bụ, ma ọ bụ d e ịmaliteghị igwu egwu, ma ọ bụ d e ị nọ na-egwu egwu oge ụfọdụ, ma ọ bụ na ị nwetaworị ihe ịga nke ọma na-egwu egwuregwu, m ghọtara nke gị, dịka m, ga-ahụ Texas Poker Isiokwu ruru ka eziokwu m ga-n’ezie na-enweghị nsogbu okirikiri nhọrọ ukwuu fọrọ nke nta dum na ị chọrọ ka ha ghọọ a bang t egosighị mmetụta. Yabụ ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ị bụrụ onye a kụrụ akụ d e poker ma kpata self na-enweghị nsogbu ịgba chaa chaa ihe ntụrụndụ ị hụrụn’anya, ị ga-enwe ike ịnweta akwụkwọ akụkọ a.
Atụmatụ Poker Texas – Nga-flop
Nke mbụ na ọ ga-abụrịrị na ebe kachasị dị oke mkpa ịchọrọ nyocha bụ ụzọ iji nweta ụzọ ma ọ bụ ụzọ. Nke a bụ otu akụkụ nke Poker Texas Poker gị bụ nke kachasị mkpa n’ihi na pre-flop bụ ọnọdụ ị ga-etinye oge kachasị na – n’eziokwu ọ bụla aka.
Atụmatụ Poker Texas – Post-flop
Postzọ ị ga – eme bụ ihe kachasị mkpa ga – esochin’ihi eziokwu ahụ bụ d e ọ bụ nke abụọ kachasị nwee ike ịbanye – ị nwere ike ịkọ ma hụ flop ahụ. Ọ dị oke mkpa ịchọta ụzọ iji nagide ọnọdụ niile enwere ike ibilite ebe a, ma enwere ọtụtụ.
Atụmatụ Poker Texas – Tụgharịa
Mpempe akwụkwọ ahụ dị oke mkpan’ihi na ọ nwere ike’gbanwee’ egwuregwu. Ma onye mmeri ga-echekwa mmeri ma ọ bụ ebili mmiri ga-atụgharị nke ukwuu ma onye so na ya nwere aka n’akụkụ aka ga-eme nnukwu. Kedu ka ị chere si nye aha ya?
Atụmatụ Poker Texas – Osimiri / Ngosipụta
N’ozuzu, egwuri egwu nwere ike ọ gaghị enwe ike ịmalite ike ha na osimiri. Mgbe ụfọdụ, agbanyeghị mgbe ụfọdụ. Ihe ndị dị mkpa iji nyochaa ebe a bụ ịchọpụta bluffs ma na-ewepụ ihe ndị kachasị n’aka onye iro.
Atụmatụ Poker Texas – Na-agwa
Poker na-agwa dị oke mkpa mana ugbu a, ọ bụghịzi ọnọdụ dị mkpa nke poker – ịmalite. Ọzọkwa, na ọdịdị nke online egosighị mmetụta egosi na-aghọ nnọọ obere mkpa. Mana n’ime ụdị ndụ ọ bụla, yana ozi nwekwara ike bụrụ ihe ọzọ, yabụ ọ bara ezigbo uru ịghọta ihe ndị bụ isi.
Atụmatụ Poker Texas – Ikekwe
Eleghị anya bụ ebe dị oke mkpan’ịntanetị. Agbanyeghị na enwere ndị mmeri na – enweghị ike ịgbakọ ohere iji zụta ụdị ndụ ha, ọ ga – enyere aka ma ọ bụrụ na ị ga – enweta ọkwa dị elu na ebe a.
Atụmatụ Poker Texas – ma
Behavior bụ otun’ime, ma ọ bụrụ na ugbu a agaghịkwa kacha oké mkpa ebe egosighị mmetụta. Poker bụ akparamaagwa fọrọ nke nta. Etu ị si nye onyinye ihe onyogho gi, uzo ujo, ime uzo, udiri gi na ihe nweta. Ọtụtụ ihe na-agbada azụ azụ na akparamaagwa.
Ugbu that a ị na-agụ nke a, ọ ga-abụrịrị na ị ga-abanye na ịmatakwu banyere mpaghara pọọki niile pụrụ iche nke nwere mmetụta na mmezu gị. N’eziokwu, ị nwere ike ịchọpụta ugbu a na enwere mpaghara ole na ole ị na-eche abụghị 100 percent ezigbo na nke a nwere ike bụrụ ebumnuche nke mmebi ọ bụla ị ga-enweta ugbu a. Ihe kwesịrị ekwesị bụ na enwere azịza na kilomita yan’ime gị.
Ka ị na-agụ akwụkwọ akụkọ a, ị na-enwe ahụmịhe siri ike nke mmasị d e aghụghọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obi ụtọ, nke ịmara ụzọ ọhụrụ na usoro dị irè iji merie mkpụrụ self ka ukwuu na-egwu poker. Achọrọ m ka ijiri echiche that a nke mmasi, mmetụta nke na-eme ka ịchọrọ ịchọpụta ọnụọgụ ọ bụla enwere ike inyere gị aka na njem poker gị. Maka na oge niile ị t – eme eme ma na – agbakọba ọnụọgụ ọhụụ ị ga – abụ nnukwu onye so d e poker. Na oge ọ bụla, ị na-ala azụ website t ohere ị ga-eji tụlee ihe dị ka poker ka ị bụrụ onye so na ya.